Zeziphi iindawo zomthetho wokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba Ngaba ukuQina kwakho kuhlala kuQinisekile?
ikhaya / Zeziphi iindawo zomthetho wokuthengiswa kwezindlu kunye nomhlaba Ngaba ukuQina kwakho kuhlala kuQinisekile?
yethu qinile iphatha ukuvalwa kwezindlu nomhlaba kubathengi kunye nabathengisi. Sikwaphatha nokuvalwa okuntsonkothileyo kubandakanya iipropathi ezikhathazayo, ezinjengokuxelwa kwangaphambili, intengiso emfutshane, okanye izabelo. Siphatha umda othile wokurhweba izindlu ezithengiswayo njengokuba.
Zeziphi ezinye izizathu eziqhelekileyo zokuba abantu bafune igqwetha lezindlu?
Ukuthengiswa kwezindlu nomhlaba ngendalo kuza nomngcipheko. Umntu unokusebenzisa isazisi sobuxoki okanye enze ngathi ungumnini, aze athathe imali abaleke. Ngamanye amaxesha, abantu abazithathi ixesha lokujonga ukuba umntu wenzani aze awe kuloo nto. Ukuba uthenga izindlu nomhlaba okulo uphantsi kwembambano, kufuneka ube negqwetha lokuthengisa izindlu nomhlaba. Kunokubakho iingxaki ngokuhlola okanye ukucanda umhlaba onokuthi uncedwe ligqwetha lezindlu nomhlaba.
Ndingawulungiselela njani ngaphambi kokuba ndithengise okanye ndithenge ipropathi?
Abanye abathengisi bafuna ukuthengisa iipropathi zabo njengoko kunjalo ngelixa abanye banokufuna ukwenza ukulungiswa okuthile, ukuze bonyuse ixabiso labo lokuthengisa. Abanye abathengi bafuna ukuthenga ipropathi kwindawo ethile, nokuba ithini na imeko. Uhluka kakhulu umntu kuye komnye.
Ngaba kufuneka ndisebenzise ikhontrakthi yokuDweliswa kweeNdawo eziHlanganisiweyo okanye ngaba ndifanele ndisebenzise isiko elalilungiselelwe liGqwetha lam?
Uninzi lwentengiselwano, isivumelwano soluhlu oluqhelekileyo luhle. Ezinye zezinto esiqhele ukujongana nazo ngaphandle kwesivumelwano sokudweliswa ziitanki zeoyile kunye nongcoliseko lomhlaba. Yiyo yonke into ehoyo ngononophelo lwegqwetha.
Ngaba Uya Njengamagqwetha Am Uphengulula Isivumelwano ngaphambi kokuba Utyikitye xa uthenga impahla?
Kuphantse kube kungafanelekanga kum ukuba ndihlole ikhontrakthi ngaphambi kokusayina kuba nayiphi na into ekufuneka siyinyamekele kuloo khontrakthi inokwenziwa ngexesha lokuhlolwa kwegqwetha. Phambi kokuba ikhontrakthi isayinwe ngawo omabini amaqela, ayisosivumelwano.
Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi Ukuphathwa kweNtengiselwano yeZindlu kunye neNdawo eND, i iseshoni yesicwangciso sobuchule lelona nyathelo lakho lilandelayo. Fumana ulwazi kunye neempendulo zomthetho ozifunayo ngokufowuna (973) 200-1111 namhlanje.